Inaliti zomngundo uyilo-Ningbo MINGYU UMFUZO IMVELISO CO., LTD
Ikhaya>Ngathi>Inaliti Ikubumbe Design
Kule minyaka idlulileyo, MINGYU Mold uyile amakhulu ezahlukeneyo zeplastiki ngumngundo. Nokuba ufuna ukungunda okusisiseko okanye ukungunda okuntsonkothileyo, kukho abasebenzi abanezakhono kunye namava ukuyila ukungunda kwakho ngokufanelekileyo nangexesha
2D Ikubumbe Design
I-MINGYU MOLD ibonelela ngoyilo olupheleleyo oluneenkcukacha eziprintiweyo zazo zonke izinto zokubumba. Oku kubandakanya uyilo lobunjani kunye nemizobo yendibano ngebhili eyahlukileyo yezinto eziphathekayo. Uyilo ngalunye lubandakanya incwadi yokubumba. Ezi nkcukacha zenkcukacha zichaza zonke izinto ezibalulekileyo zokubumba kunye nolwazi malunga nokubumba kwakho. Sikwanikezela ngesikimu sembaleki yomoya, hydraulic, yombane kunye neshushu xa kufanelekile. Kukho uluhlu lokutshekisha kuyilo lokuqinisekisa ukuba uyilo lwesikhunta lugqityiwe kwaye luyahlangabezana nemigangatho ephezulu yomgangatho. Siyakholelwa ukuba sinikezela ngeenkonzo eziphambili zoyilo kunye nezobunjineli. Siyaqhubeka siphucula amandla ethu okuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu nakwixa elizayo.
3D Ikubumbe Design
Sinikezela ngeenkcukacha ngeenkonzo zokuyila ze-3D ezisusela kulwahlulo lomgca olula ukuya kwindibano epheleleyo ye-3D yokubumba kusetyenziswa isoftware ye-3D. Iimodeli zethu zoyilo ze-3D zibandakanya yonke imigca yokuzahlula, imijikelo, iifilitha kunye noyilo.
Senza i-3D Mold Design kunye neemodeli zecandelo ngalinye leempawu, imingxunya, ubuso besilayidi, kunye nee-electrode ze-EDM kubenzi benkqubo yokwenza i-CNC. Ngokwenza izinto zokubumba njengeemodeli eziqinileyo ze-3D, indlela yokusika ye-CNC inokucwangciswa ngokuthe ngqo ukusuka kwisiphumo sejiyometri kusetyenziswa ii-Unigraphics. Izalathiso ze-2-D kunye nemizobo yeenkcukacha zigqityiwe kwii-Unigraphics okanye zithunyelwa kwamanye amaphakheji e-CAD.
Iqela lethu lobunjineli liza kusebenza kunye nawe ukuphuhlisa ukungunda okudingayo usebenzisa imodeli enamacala amathathu kunye netekhnoloji ye-state-of-the-art ukuqinisekisa iziphumo ezichanekileyo.
Siza kusebenzisa inkqubo yohlalutyo lokuhamba komngundo xa kukho imfuneko.
Uhlalutyo lokumpompoza kubandakanya ukugcwaliswa kunye nokupakishwa kwamanqanaba enkqubo yokubumba inaliti.
La manqanaba avelisa ezinye zezona ziphumo zibaluleke kakhulu zokuyila imveliso yoyilo lokuvelisa ngenaliti.
Iziphumo zeWarpage zingasetyenziselwa ukuchonga iindawo ezinemfazwe emininzi kunye nokuncipha, ukubhekisa kwimidwebo yemveliso kunye nokunyamezelana, kunokwenzeka ukuba kuthathwe amanqaku kwimilinganiselo yokujonga iziphumo zohlalutyo ukuqinisekisa ukuba ubukhulu obubalulekileyo buya kuba nokunyamezelana emva kokubumba.
Ixesha lokugcwalisa: iiprofayili zesantya kunye nesayizi yefoto (umatshini othile)
Ixesha lokumisa: ixesha lokukhulula imbaleki, isango kunye nenxalenye
Ixesha lokupakisha kunye noxinzelelo: iiprofayili zesigaba sokupakisha (umatshini othile)
Iindawo ezinemigca yeWeld
Ukuncipha kwevolumetric: amaxabiso okuncipha kwenxalenye yejometri zenxalenye
Izinga lokucheba: amaxabiso okucheba aveliswe ngexesha lokuzalisa kunye nokupakisha
Uxinzelelo ku V / P utshintsho ngaphezulu
Uxinzelelo lwe-Inaliti: amaqondo oxinzelelo anamava ngexesha lokuzalisa kunye nokupakisha
Iingxelo kunye neziphumo zinokulungelelaniswa nezicelo ezithile zesahlulo sokujongana neengxaki.